Turkiga ayaa si kulul u beeniyey warar sheegaya in Ciidamo Soomaali ah loo dirayo Libya… – Hagaag.com
Turkiga ayaa si kulul u beeniyey warar sheegaya in Ciidamo Soomaali ah loo dirayo Libya…
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz ayaa si kulul u beeniyay wararka warbaahinta ee sheegayay in Ankara ay wado dadaalo ah in ay qaadayso Ciidamado Soomaali ah oo loo dirayo Libya, si ay uga qeyb qaataan dagaalka lagula jiro xoogagga mucaradka ah ee Gen. Khalifa Haftar.
“Waxaan la soconaa wadamada qaar in ay Soomaaliya u caawinayaan danahooda gaarka ah. Anaga caawinteena Soomaaliya waa dadaal bartilmaameed ah. Eedeymahaasina Wax run ah kama jiraan,” ayuu yiri danjiraha.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 1,000 sarkaal oo booliis ah oo gaar ah ay u tababari doonaan Soomaaliya, Waxaa kale oo safiirku sheegay in dowladdiisu ka shaqeyso in Soomaaliya hesho ciidamo awood u leh inay Amisom kala wareegaan mas’uuliyadda amni ee dalkooda.
Dhawaan, Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa sidoo kale beenisay warkaan, iyadoo sheegtay in Ciidamada Soomaaliya aysan ahayn calooshood u shaqeystaal dano gaar ah loo adeegsado.